दलान नेपाल : यो के हो महोदय ?
यो के हो महोदय ?
at 10:20 AM Posted by Dalan
सोमबार मधेशसंग सम्बन्धीत ५ ओटा संघसंस्थाले संयुक्त ध्यानकार्षन विज्ञप्ति निकाल्दै संजय साहको वारेमा सदभावना पार्टीको आवाज मा सही थप्दै साहको बचाउमा जुटेको देखिन्छ । आफुलाई पुर्ण रुपमा स्वतन्त्र भनाउने यी संस्थाहरुले संजय साहको लागी नै मुख्यगरी विज्ञप्ति निकाले देखिन्छ । हुनत अरु विभिन्न मुद्धाहरु समावेश गर्दै साहको मुद्धा पनि एउटा वुद्धामा मात्रै समेटेको कतिपयले भन्नालान । तर, उदेक लाग्दो कुरा त के भन्ने यसमा मधेशी पत्रकारहरुको प्रतिनिधीत्व गर्दै आएको दाबी गर्ने मधेशी पत्रकार समाज देखि आम मधेशी नागरिकको पक्षमा अभियान चलाउने मधेशी नागरिक समाज पनि छन ।
मिती २०७0/१२/२४ गते
आन्तरिक औपनिवेशिकरणको सिकार मधेशमाथि राज्य आंतक बढ्दै गएको छ । मधेश आन्दोलनपछि दमनको कडी शिथिल भएको महसुस भएपनि राज्यले मधेशलाई ठुलो षड्यन्त्रमा पारेको प्रमाणहरु फेला पारेका छन् । मधेशका राजनीतिकर्मीहरुलाई एकपछि अर्को गरी झुठा आरोपमा फसाएर समाप्त परिदैछ भने मधेशमा प्रहरी प्रशासनद्धारा गैरन्यायिक हत्याको श्रृखला अझै रोकिएको छैन् । सशस्त्र समुहलाई निर्मुल पार्ने नाउँमा मधेशमा युवा शक्तिलाई जेलमा हालिएको छ । मधेशीमाथि सुनियोजित ढंगले प्रहार गरिदैछ भने समावेशीकरण तथा संघीयताका मुद्दालाई विचिलित गर्ने विभिन्न प्रोपागान्डा रचिएको छ । तसर्थ, उपनिवशेबाट मुक्त गराउन तथा राज्य आतंकबाट मधेशलाई जोगाउन हामी यहाँको ध्यानकार्षण गराउदछौं ।
ध्यानाकर्षणका मुद्दाहरु स्
१, मधेशमा व्याप्त गैरन्यायिक हत्याको श्रृखंला अविलम्ब रोकियोस् र अन्र्तराष्ट्रिय निकायद्धारा छानविन गराईयोस् ।
२, सशस्त्र समुहका नेता कार्यकर्ताहरुको गैरन्यायिक हत्या गर्ने क्रमको अन्त्य गरी तत्काल उनीहरुसँग वार्ताको प्रक्रिया पुनःथालनी गरियोस् ।
३, सभासद् संजय साहमाथि लगाईएको आरोपको छानविनको लागि तत्काल उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठन गरियोस् ।
४, प्रवेशिका परिक्षाको दौरान धनुषामा प्रहरीद्धारा छात्राहरुमाथि गरिएको अभद्र व्यवहारको तुरन्त छानविन गरियोस् र घाइते छात्रहरुको अविलम्ब उपचार गराई उनीहरुको लागि पुनः परिक्षाको व्यवस्था मिलाइयोस् ।
५, दैनिक जसो मधेशमा भईरहेको आगलगीबाट पिडीत जनतालाई तत्काल राहत उपलब्ध गराइयोस् ।
६, सञ्चारमाध्यमलाई समावेशी गर्ने सम्वन्धि उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदनलाई तुरन्त कार्यान्वयन गरियोस् ।
७, रिक्त रहेका संवैधानिक निकायका पदहरुमा सार्थक समावेशी र समानुपातिक ढंगले नियुक्ती गरियोस् ।
८, पत्रकार विपी साहमाथि भएको सांघातिक आक्रमणको छानविन गरियोस् र पिडीत पत्रकारलाई क्षतिपुर्ति प्रदान गरियोस् ।
९, मधेश आन्दोलनताका राजधानी काठमाडौंबाटै वेपता पारिएका जितेन्द्र साहको अबस्थाबारे सत्यसत्य सार्वजनिक गरियोस् ।
१०, समावेशीकरण र संघीयताका मुद्दालाई ओझेलमा पार्ने हर्कत तत्काल रोकियोस् ।
मधेशी कानुन व्यवसायी समाज
मधेशी प्रोफेशनल एलायन्स
मधेशी पत्रकार समाज नेपाल
मधेशी सांस्कृतिक कलाकार संघ
Unknown November 28, 2014 at 2:53 PM